“नौ महिनाको बच्चा च्या’पेर डि’उटीमा चे’ङिक गर्दै!:: Mero Desh
“नौ महिनाको बच्चा च्या’पेर डि’उटीमा चे’ङिक गर्दै!
Published on: ३१ चैत्र २०७७, मंगलवार ००:२८
काठमाडौं ।खोटाङ घर भएकी प्रहरी जवान बोना ढकाल जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इलाम मातहत रहेर काम गर्ने गरी इटहरीबाट इलाम सरुवा भएकी थिइन् ।२०६३ चैत २० मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी ढकालको इलाम बजारमा ड्युटी थियो । बजारमा सवारी व्यवस्था’पनका लागि सिट्ठी फुक्दै थिइन् । नयाँ–नयाँ भएकाले उत्साह पनि थियो ।
सोही समयमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बग्गी खाना मा’तहत का’म गर्ने विरा’टनगर पोखरियाका ट्राफिक प्रहरी हबल्दार अजित राउत पनि सरुवा भएर इलाम गए । अजित इलाम पुग्दा बोना सडकमा ड्युटीमै थिइन् अजित ले बोनालाई पहिलोपटक सडकमै देखे । देख्नेबित्तिकै उन लाई बोना मन परेको रहेछ।
तर लजालु स्वभावका अजितले बोल्ने हिम्मत भने गरेनन् । संयो’गवश बोना’का बहिनीहरूसँग अजितको चिनजान रहेछ । उनले बहिनीहरूको माध्यमबाट नजिकिने योजना बनाए । एकदिन अजितले बोनाकी बहिनीलाई घुम्न जाने अफर गरे । उनले सहमति पनि जनाइन्, त्यसपछि शर्त राखे– दिदीलाई पनि लिएर आउनुपर्छ।
उनको प्लानले काम गर्‍यो, तर दिनभरी घुम्दा बोलचाल भने भएन । ‘बहिनीसँग त चिनजान थियो तर उनीसँग कसरी बोल्ने भन्ने पत्तो थिएन, अलिकति डर लागेको थियो,’ प्रहरी हबल्दार अजितले भने, ‘इलाम घुम्न त गयौं तर दिनभरी बोलचाल नै भएन ।’ त्यतिबेला बोनालाई पनि अजित मन परेको रहेछ, तर बहिनीको प्रेमी होला भन्ने सोचेर कुराकानी गर्ने हिम्मत गरिनछन् ।
‘बहिनीले घुम्न जाऊँ भनेर गएँ । बहिनीकै ब्वाइफ्रेन्ड होला जस्तो लागेको थियो त्यसैले बोलिनँ,’ बोनाले भनिन्, ‘तर मनचाँहि परेको थियो ।’त्यो दिन बोलचाल नभए पनि कार्यालय एउटै थियो । अजितले लुकीलुकी उनलाई हेर्थे, बोना भने अझै पनि बहिनीको प्रेमी होला भन्ने सोचेर खासै नजिकिन चाहँदैन थिइन् । ‘मलाई मन परेको थियो, तर उनले भाउ नै नदिने, बोल्न आँट नै आउँदैनथ्यो,।
अजितले भने, ‘यसो लुकेर मात्रै हेथेँ ।’ अजित यतिसम्म लजाउँथे कि बोनाले खाना खाँदै गरेको बेलामा मेसमा समेत छिर्दैनथे । उनी निस्किएपछि मात्र भित्र छिरेर खाना खान्थे । ‘मन भित्रबाटै माया लागेपछि उनको अगाडि जान अड फिल हुन्थ्यो,’ अजितले भने । एउटै अफिसमा बेला बेलामा एकै ठाउँमा ड्युटी पर्थ्यो । अजितले सिट्ठी फुक्दै हातले सवारीलाई इशारा गर्थे, तर आँखा भने बोनातिरै हुन्थ्यो ।
“अजितले बोनालाई मन पराउन थालेको संकेत उनका साथीभाइले पनि पाएका थिए । उनीहरूले जिस्क्याउन पनि थालेका थिए, तर बोनालाई भने पत्तो थिएन । रोचक कुरा त के भने त्यतिबेलासम्म पनि बोनाले अजितलाई हुनेवाला बहिनी ज्वाइँको रूपमा हेर्थिन् । मान्छे ठीक छ भन्नेचाहिँ उनलाई सधैँ लागिरहन्थ्यो । यत्तिकैमा एकदिन बोनाको मोबाइलमा म्यासेजको घण्टी बज्यो ।
खोलेर हेर्दा म्यासेजमा लेखिएको थियो– ‘आइ लभ यु….’ । सहकर्मी भएकाले अजितको नम्बर बोनालाई थाहा थियो । शुरूमा त उनले के भइरहेको छ नै सोच्न सकिनन् । कुनै प्रतिक्रिया जनाउनुभन्दा अगाडि बोनाले बहिनीलाई त्यस बारे जानकारी गराइन् । बल्ल थाहा भयो,अजित त बहिनी को प्रेमी होइन रहेछन् ।
उनी त्यसपछि फ्ल्यासब्याकमा गइन्, त्यो दिन इलाम घु’म्न जाने प्लान अर्कै पो रहेछ । मान्छे ठीक लागेकै थियो, मन परेको पनि हो, त्यसपछि भने बोनाले अजितलाई आफ्नो दिलमा सजाउन थालिन् । एउटै भवनको माथिल्लो तल्ला मा महिला प्रहरीको ब्यारेक थियो, तल्लो तल्लामा पुरुष हरूको ।
अजित तल साथीभाइसँग बसिरहँदा बोनाले माथि झ्याल बाट चिहाउन था’लिन् । लु’कीलु’की हेर्ने पालो अब बोना को थियो सडकमा ड्युटीका बेला आँखा जुध्दा मुस्कुराउन थालिन् अजितले पठाएको आइ लभ यु म्यासेजको जवाफ भने उनले किस्ताकिस्तामा दिइन् ।‘उहाँले आइ लभ यु भने को ५/६ किस्तामा बल्ल ‘एस’ भनें,’।
बोनाले भनिन्, ‘दिनप्रतिदिन माया बढ्न थाल्यो । सरहरू ले पनि तिमीहरू विवाह गर भन्नुहुन्थ्यो ।’ बोनाले त्यो बेला को एउटा रोचक घटना सुनाइन् । ‘गर्मीको महिना थियो । म माथि नुहाएर कपाल सुकाउन तल आउँदै थिएँ, उहाँ पनि नुहाएर टाबेलमा बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्थ्यो, मलाई देखेपछि त उहाँ लाजले भुतुक्कै हुनुभयो ।लगभग १५ दिन मेरो नजिक पनि पर्नु भएन ।’
प्रेममा परेपछि माथिल्लो तल्लामा रहेकी बोना र तल्लो तल्लामा रहेका अजितबीच दिनमै सयौं एसएमएस आदान प्रदान हुन्थ्यो । त्यतिबेला अहिलेजस्तो च्याटको जमाना थिएन, एस’एमएसमै च्याट हुन्थ्यो । यसैगरी ३ वर्ष बिते । साथीभाइ र हाकिमहरूले विवाह गर भन्न थाले । २०६६ फागुनमा आ’यो त्यो शुभ दिन, औपचारिक रूपमै अजित र बोना एकअर्काको भए ।
मन परेपनि विवाह अगाडि बोनाले दिदीसँग राय मागिछन्, दिदीले पनि ओके भनेपछि उनीहरूको विवाह वि’नारोक तोक स’बैको सह’मतिमै भयो।विवाहपछि हनिमुन मनाउन पोखरा पुगे, काठमाडौं पनि आए ।प्रहरीको जागिर भएका ले धेरै दिन बिदा भने लिएनन् । ‘चालिस कटेसी रमाउँला …, ड्युटी त गर्नैपर्‍यो,’।
अजितले ठट्टा गरे ।उनीहरूले श्रीमान् श्रीमती मिलेर एउटै ट्राफिक कार्यालय पनि चलाएका छन् ।‘बुढाबुढीले ट्राफिक कार्यालय चलाएको देख्दा धेरै मानिसले प्रशंसा पनि गर्नु हुन्थ्यो । त्यो बेलामा साह्रै खुशी लाग्थ्यो,बोनाले लोकान्तर सँग भनिन् ९ महिनाको बच्चा पिठ्युँमा बोकेर गाडीचेकिङ
विवाहपछि पहिलो सन्तान छोरा जन्मियो । नियमानुसार पाउने सुत्केरी बिदामा बसिन् । त्य’सपछि ड्यु’टीमा फर्किनु त थियो नै । ९ महिनाको छोरालाई पिठ्युँमा बोकेर चिट काट्दा मानिसहरूले ‘हेर ट्राफिक्नीको दुःख’ भन्थे तर हौसला भने कसैले नदिएको बोनाले सुनाइन् । ‘त्यो बेला इट’हरीमा थिएँ ।
इन्डियाबाट ट्रकहरू आउने । ९ महिनाको बच्चा पिठ्युँमा बोकेर चेकजाँच गर्थें, ट्राफिक नियम मिच्नेलाई कारवाही गरें,’ ती दिन सम्झिँदै बोनाले भनिन्, ‘हौसला कसैले दिँदैनथे, उल्टै हेर ट्राफिक्नीको दुःख भन्थे ।’श्रीमान श्रीमती दुवै ड्युटीमा जानुपर्ने भए’काले बच्चा लै’जानुको वि’कल्प थि’एन । परिवारको जिम्मा लगाएर घरमा छाड्न पनि दूधे बालक भएकाले सम्भव थिएन ।
२०७२ सालको भूकम्प आउँदा उनी काठमाडौंमा थिइन् । पेटमा दोस्रो सन्तान थियो । पिसाब लागेर बानेश्वरको एउटा घरको ट्वाइलेटमा छिरिन् । भूकम्पले हल्लायो । उनी ट्वाइलेटमै लडेर बेहोश भइछन् । २ घण्टापछि उद्धार गरेर अस्पताल लगियो ।श्रोत लोकान्तर बाट